Vaovao - Fikarohana sy fampandrosoana vaovao momba ny vokatra vaovao AngelBiss 2020
AngelBiss 2020 Fikarohana sy fampandrosoana vaovao
AngelBiss dia mifantoka amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fanavaozana ny teknolojia amin'ny fotoana rehetra. Ao anatin'ny toe-java-manahirana mafy amin'ny fitotonganana ara-toekarena manerantany, AngelBiss dia mbola mitazona ny vanim-potoana fampandrosoana tsara, ary ny orinasa dia nahavita fampandrosoana haingana tao anatin'ny taona vitsivitsy.
AngelBiss dia manizingizina ny fitarihan'ny mpanjifa sy ny filan'ny tsena ary mampivelatra tsy tapaka ireo vokatra vaovao mety amin'ny tsena antonony hatramin'ny farany. Amin'izao fotoana izao, ny orinasantsika dia miezaka ny hikaroka sy hampivelatra ireto vokatra manaraka ireto:
1. Masinina mitsentsitra tavoahangy roa-tavoahangy mety indrindra amin'ny scenario fandidiana isan-karazany
2. Generator oksizenina 5L vaovao- na ny teknolojia fanodinam-bokatra ataontsika aza dia matotra tokoa, ary ankehitriny manandrana manatsara azy kokoa izahay.
Ny vatan'ny mpanentana oksizenina 5 litatra nohavaozina dia hihamamiratra kokoa ary ho kely kokoa, hihatsara koa ny vokatra.
3. Mpiorina oksizenina 10L vaovao - manatsara indrindra ny akorandriaka masinina, manolo ny akorandriaka vy misy akorandriaka plastika, manavao ny firafitry ny masinina, ny lanjan'ny mpanentana oksizenina nohavaozina dia hahena be, ary mety kokoa amin'ny mihetsika sy mitondra
4. Masinina famonoana otrikaina- Araka ny fantatra, Ozone dia manana fiasan'ny famonoana otrikaina sy fanamorana. AngelBiss R&D Department koa dia manao fikarohana amin'ny sehatry ny fampiharana ozon.
5. Masinina azota-oksizenina-mampiasa teknolojia PSA hampisaraka ny azota sy ny oksizena eny amin'ny habakabaka, izay ampiasaina amin'ny sehatra fampiofanana hypoxic isan-karazany.
Azafady mba andraso foana!
Fotoana fandefasana: Aug-06-2020